Videos – Complete Nepali News Portal
Videos	Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper
“अलि अली चल्यो हावा बनै “मा बोलको म्युजिक भिडियो
गायक इलाज प्रसाईं र गायिकाअनिशा तामाङको स्वरमा सजिएको “अलि अली चल्यो हावा बनै “मा बोलको म्युजिक भिडियो भर्खरै रिलिज भएको छ। भावना थापा सेवाचार्यले रचना गरेको उक्त गितमा बाल कृष्ण सेवाचार्यले संगित भरेका छन् । उक्त म्युजिक भिडियोमा धुर्व र बुनुको अभिनय देख्न पाइन्छ। यस गीतले चर्चा पाउनेमा निर्देशक म्याङ …
June 18, 2017	Videos
दार्जिलिङमा चर्किएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका क्रममा आज सेनाले चलाएको गोली लागेर तीन जना गोर्खाल्याण्ड समर्थकको मृत्यु भएको छ । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पातलेवासस्थित कार्यालयमा दुई दिनअघि प्रहरीले छापा मारेको विरोध गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका मोर्चा समर्थक र सुरक्षाकर्मीवीच बिहानैदेखि झडप भएको थियो । सोही क्रममा सुरक्षाकर्मीले दमन गर्न खोजेपछि स्थिति तनावपूर्ण भएको …
दुधे बालक र प्रहरीलाई हत्या गर्नलाई १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति(भिडियो सहित)
धनगढी : टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशम चौधरीलाई सरकारले १ करोड ७४ लाख क्षतिपूर्ति दिएको छ। टीकापुर घटनाको भोलिपल्ट ०७२ भदौ ८ गते भएको आगजनीका पीडितलाई राहत दिने क्रममा सरकारले चौधरीलाई सबैभन्दा बढी रकम उपलब्ध गराएको हो। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने, केशव बोहरा र बलराम विष्ट गरी दुईजना …
श्रीमती हुँदा-हुँदै भद्रगोलको जयन्ते डाम्नाले भने- केकी अधिकारी पाए भने बिहे गर्छु !
के तपाईले हाम्रो च्यानललाई SUBSCRIBE गर्नु भयो ? गर्नु भएको छैन भने यस्तै रमाईलो भिडियो हेर्नका लागि आजै SUBSCRIBE गर्नुहोस । आफ्नो अमुल्य समय दिएर यस भिडियो हेर्दिनु भयो, त्यसका लागि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद । साथै लाईक, सेयर र कमेन्टहरुका लागि धन्यवाद । तपाईहरु यस युटुब च्यानल मार्फत् कस्को अन्तर्वार्ता …
ल्याण्ड आन्दोलनमा यसकारण बोल्नुपर्छ नेपाल ? भिडियो सहित !!
“नेपालको लागी हामी ले पनि बोल्नु पर्छ,नेपाली त सबैका साझा नेपाली हैन र?कोही रुदा,आपत पर्दा सहयोग गर्नु धर्म हो किनकी हामी मॉनिस भनेको अरुको सेवा गर्न जन्मेका हौ यो पक्का हो र हुनुपर्छ सबैको सहयोगको भाब होस यो शुभकामना गर्छु म तपाईहरु लाई दुख पर्दा हामीलाई पनि दुख छ र …
माता पाथिभरा ,पुर्ण डकुमेन्ट्री दर्शन गर्न जानु अघि हेर्नै पर्ने भिडियो
दमक झापा । पाथीभरा माताको मूल थान मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्दछ । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट १९.४ किमिको दूरीमा भए तापनि उच्च पहाडी भेग भएकाले लगभग सजिलै २ दिनको हिँडाइमा पुगिन्छ । माताको मन्दिर समुद्र सतहबाट ३७९४ मिटर अर्थात् १२ हजार ४४४ फुटको उचाइमा अवस्थित छ । अन्न भरेको पाथी …
गोर्खालीहरुको हक अधिकारका लागी गठन भएको पहिलो संगठन गेसो
स्कटनेपाल , १२ जुन २०१७ : गोर्खालीहरुको हक अधिकारका लागी गठन भएको पहिलो संगठन गेसो । कहिले पनि अरु संगठनहरु संग सहकार्य नगर्ने परम्परालाई तोडदै । के अब गोर्खा आन्दोलनले नयां गति पाउला त ? सधै अरु संगठनको विरोध गरि रहने संग सहकार्यको एकता कसरी सम्भव भयो । संयोजकले बताए— …
९ बर्षका प्रेमी बालकले रुदै भने मेरी प्रेमिका खोज्दिनु बिहे गर्छु – भिडियो
स्कटनेपाल १० जुन २०१७ : सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक एक भिडियोमा करीब ९ बर्षका एक प्रेमी बालकले रुदै प्रहरी संग मेरी प्रेमिका खोज्दिनु म बिहे गर्न चाहान्छु भनेका छन् । आखिर किन उनले यसो भने यो हेर्नुहोस् अनौठो भिडियो ।
सन्दिप छेत्रीले एयर होस्टेजलाई जिस्काएपछी पोखरामा भयो हंगामा (भिडियो सहित)
स्कटनेपाल १० जुन २०१७ : सन्दिप छेत्री नाम सुन्न साथ आम नेपालीहरु अब मज्जालै हसौछंन भन्ने अड्कल काट्दछन्. लायेंस क्लब अफ पिस चौतारीले पोखरामा आयोजना गरेको हास्यकार्यक्रममा सन्दिप छेत्रीले दर्सकलाई राम्रै संग हास्एका थिए.उनले करिब एक घण्टा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए साथै कार्यक्रममा उनीसंगै मनोज गजुरेल,शिबहरि पौडेल,लगाएत आधा दर्जन कलाकारले …
स्कटनेपाल जून ६ , २०१७ : एकदमै मार्मिक लेख स्वेता खड्काजी : म सवैलाई क्लियर गर्न चाहन्छु–म मेरो श्रीहजुरको बाहेक अरु कसैको पनि हुन सक्तिन। बाँचुन्जेल मैले अर्को विहे गर्दिन । यो मेरो कसम हो। मेरो श्रीहजुरप्रतिको मेरो समर्पण र श्रद्धान्जली हो। (श्याम स्मृतद्वारा लिखित अमर नायकको संझना पुस्तकबाट साभार …
Page 1 of 2912345	»	1020...Last »	RecentPopularCommentsTags	तिमि जादा पराइ को डोलीमा…. हाम फालेर मर्छु म खोलिमा………मार्मिक गित भिडियो